Tsinontsinona lamaody lehilahy sandoka QL-1518 mpanamboatra streamline mpanamboatra sy mpamatsy | Qundeli
entana NO .: QL-1518
laharana No. QL-1518 lahy sy ny vavy olona
Classical sy maharitra
Ity slipper ity dia mampiasa fitaovana avo lenta izay azo antoka fa tsy misy fofona ny kiraro ary maharitra mateza tokoa.
Maivana sy fiarovana
Mahafinaritra, malefaka, maivana, mateza, mora diovina ary maina vetivety ireto kapaoty ireto.
Mitokana miaraka amina famolavolana manokana, mifidy fitaovana EVA avo lenta, manana fanoherana tsara, ampiarahana amin'ny tsindry amin'ny lanjan'ny vatan'olombelona mitombo ny fikororohana hitazonana ny fandanjana tsara kokoa, indrindra ampiasaina amin'ny fandroana.
Ity slipper ity dia mampiasa fitaovana avo lenta izay azo antoka fa tsy misy fofona ny kiraro ary maharitra be izy ireo. Ireo kapaoty dia mahazo aina, malefaka, maivana, mateza, mora diovina ary maina haingana.
Mitokana miaraka amina famolavolana manokana, mifidy fitaovana EVA avo lenta, manana fanoherana tsara, ampiarahana amin'ny tsindry amin'ny lanjan'olombelona, ​​nitombo ny fikorontanana hitazomana ny fandanjana, indrindra ampiasaina amin'ny fandroana. milamina sy milamina ianao rehefa mandeha amin'ny gorodona malama.
Ny akanjo fitondra amin'ny kapitaly amin'ny vanim-potoana rehetra toy ny efitrano fandroana, efitrano fandriana, efitrano fisoloana akanjo, lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, zaridaina, pisinina, gym, ary koa manodidina ny trano, morontsiraka sns.
Ankafizo ny fotoana fialan-tsasatrao amin'ity kapaoty malemilemy ity, tongotra an-tongotra ary fanerena aorian'ny asa mafy. , trano, fandroana, filomanosana, efitrano fandraisam-bahiny, toby, efitra fisoloana akanjo, fanorana, spa, an-trano, any ivelany, toeram-pialofana, na aiza na aiza hialana sasatra fotsiny na aiza na aiza. Arovy ny tongotrao amin'ny mikraoba, bobongolo, holatra ary bakteria amin'ny gorodona. Tonga lafatra amin'ny fitafiana isan'andro.
Mampiasa fitaovana manokana premium izahay hanamboarana ireo kapaoty fanarenana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany dia manome azy ireo 200% fanoherana tsara kokoa amin'ny abrasion, fihenan'ny 10% tsaratsara kokoa, fahazarana 10% ambony kokoa, ary fihenam-bidy bebe kokoa raha oharina amin'ny fifaninanana.
Tsy toy ny kiraro hafa izay mampitombo ny fanaintainan'ny plantar fasciitis, ny tsininay dia manambatra ny fanohanan'ny andohalambo malefaka, fitaovana manaitra ny hatairana, ary ny ombelahin-tongony kely miiba mba hamoronana fandriana tongotra mihoampampana izay manome fanamaivanana ny fanaintainana. Mandehana tsy mahazo aina amin'ny kiraro lancholy tany am-boalohany notohanan'ny mpandidy orthopedic, kiropraktera ary podiatrist manerantany.
Manampy amin'ny fanamaivanana ny fasciitis plantar, mandroroa ny voditongotra, tongotra fisaka, aretin-tratra, neuritis, achilles tendinitis, bunion, metarsalgia, esamoiditis, shin splints, hallux rigidus sns. , filomanosana, fanatanjahan-tena amin'ny baolina, fikolokoloana, fialantsasatra, fialamboly ary asa.
Teo aloha: slipper lehilahy maharitra QL-835 kilasika
Manaraka: slipper lehilahy manotra QL-1397 mahazo aina
slipper lehilahy miaina QL-1827 anaty trano
manentsina lamaody QL-1610 ny olona
lehilahy manentsina QL-1912M tsy lamaody tsy mihetsika
mpanao paipaika miloko mareva-doko QL-1648